အဘမင်းသိင်္ခပြောပြတဲ့ မူလဂဏန်းဗေဒင် | Ta Pwint Pan
အဘမင်းသိင်္ခပြောပြတဲ့ ဂဏန်းဗေဒင်မှ မူလ(၁)ဂဏန်းသမားအကြောင်း
နှလုံးဆိုရင်တော့ တစ်လုံးထဲရအောင် ပေါင်းရမယ်။ ဥပမာ ၁၂-ရက်နေ့ ဆိုရင် ၁-နှင့် ၂ ပေါင်းတော့ ၃-ရတယ်။ အဲဒီတော့ ၃-ဂဏန်း သမားပေါ့။ အခု ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာက မူလ(၁)ဂဏန်းသမား အကြောင်းပါ။
မူလဂဏန်း (၁) ရတဲ့ လူဟာ အသားအရည်က ဖြူဖတ်ဖြူရော် ရှိတတ် တယ်ကွ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်လုံး ကိုယ်ပေါက်က ကြံ့ခိုင်တဲ့ လက္ခဏာ ရှိတယ်ကွ။ ဆံပင်တို့ ဘာတို့ကတော့ အများအားဖြင့် အမည်းရောင် ဖြစ်လေ့ ရှိတယ်။ ပြီးတော့ လူအများစုနဲ့ မနေဘဲ တစ်ကိုယ်ရေတစ်ကာယ နေတတ်တယ်ကွ။ နောက်တစ်ခုကတော့ (၁)ဂဏန်းသမားဟာ လူတွေကို မယုံဘူး။ အမြဲတမ်း သံသယ ရှိနေတတ်တယ်။ တော်တော်များများ (၁)ဂဏန်းသမားတွေက အာဏာပြတာတို့ အမိန့်ပေးတာတို့ လုပ်လေ့ရှိတယ်။ ပြီးတော့ အသစ်အဆန်းကို ဖန်တီး လုပ်ဆောင်တတ်တဲ့ ဥဉ်လဲရှိတယ်။
အင်္ဂလိပ်လ ဘယ်လမှာပဲ မွေးမွေး ၁-ရက် ၁၀-ရက် ၁၉-ရက် ၂၈-ရက်တွေမှာ မွေးရင် ဂဏန်းဗေဒင် သဘောအရ ၁-ဂဏန်းသမားလို့ ပြောရမှာပဲ။ ၁- ဂဏန်းသမားဟာ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရည်ရွယ်ချက်တော့ ကြီးတတ်တယ်ကွ။ ဘယ်လို အသက်မွေး ၀မ်းကြောင်းအလုပ်ကိုပဲ လုပ်လုပ် ၁-ဂဏန်းသမားဟာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အမြင့်ကို ရောက်သွားတတ်တယ်။ ပြီးတော့ ၁-ဂဏန်းသမားအတွက် အဆောင်ဟာ ရွှေပဲကွ။ ရွှေကို ဆောင်ထားရင် ကံကောင်းတယ်လို့ ရှေးက ဆရာတွေက ယုံကြည်ကြတယ်။
ပြီးတော့ ၁-ဂဏန်းသမားတွေ ဖြစ်တတ်တဲ့ ရောဂါတွေဟာ နှလုံးသွေးလွှတ်ကြော နှင့် ပါတ်သက်သောရောဂါ ၊ သွေးလေ မမှန်တဲ့ရောဂါတွေ ဖြစ်တတ်တယ်ကွ။၁-ဂဏန်းသမားအတွက် အကောင်းဆုံး ဆေးကတော့ ပျားရည်ပဲဟေ့။ ပျားရည်ကို စားပွဲ ဇွန်းကြီးနဲ့ ညအိပ်ယာဝင် တစ်ဇွန်း တစ်ဇွန်း သောက်သင့်တယ်ကွ….ဒါကတော့ အဘမင်းသိင်္ခ ပြောပြတဲ့ (၁)ဂဏန်းသမား အကြောင်းပါ။
အဘမင်းသိင်္ခပြောပြတဲ့ ဂဏန်းဗေဒင်မှ မူလ(၂)ဂဏန်းသမားအကြောင်း
အခု ပြောပြခဲ့တာက မူလ(၂)ဂဏန်းသမား အကြောင်းပါ။
အဘမင်းသိင်္ခပြောပြတဲ့ ဂဏန်းဗေဒင်မှ မူလ(၃)ဂဏန်းသမားအကြောင်း
ဘယ်လမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၃-ရက်၊ ၁၂-ရက် ၊ ၂၁-ရက် ၊ ၃၀-ရက်တွေမှာ မွေးရင်တော့ အဲဒီလူကို ၃-ဂဏန်း သမားလို့ ခေါ်ရမှာပဲ။ သူတို့က မျက်နှာ သွယ် တတ်ကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ မျက်နှာကို ကြည့်ရင် အစဉ်သဖြင့် အေးအေး ဆေးဆေး ရှိတတ် ကြပါတယ်။ ဘယ်လိုနေရာကို ရောက်ရောက် အဆင်ပြေအောင် နေထိုင်တတ်ကြတယ်။ သဘာဝ မကျအောင် ထုပ်ထားတဲ့ စည်းကမ်း ဥပဒေတွေကို တလေးတစား လိုက်နာကြတယ်။ အလုပ် ၀တ္တရား ကိုလည်း အလွန် ရိုသေ တတ်ကြတယ်။
၃-ဂဏန်း သမားတွေ အတွက် အရေးကြီးတဲ့ အလုပ်တွေ လုပ်ဖို့ ကောင်းတဲ့ ရက်တွေကတော့ အင်္ဂလိပ်လရဲ့ ၃-ရက် ၊ ၁၂-ရက် ၊ ၂၁-ရက်တွေဟာ ပထမတန်းစား ကံကောင်းတဲ့ နေ့တွေပဲ။ ၆-ရက် ၊ ၁၅-ရက် ၊ ၂၄-ရက်တွေဟာ ဒုတိယတန်းစား ကံကောင်းတဲ့ နေ့တွေပါပဲ။ ၉-ရက် ။ ၁၈-ရက် ။ ၂၇-ရက်တွေဟာ တတိယတန်းစား ကံကောင်းတဲ့နေ့တွေပါပဲ။
အခု ပြောပြခဲ့တာက မူလ(၃)ဂဏန်းသမား အကြောင်းပါ။
အဘမင်းသိင်္ခပြောပြတဲ့ ဂဏန်းဗေဒင်မှ မူလ(၄)ဂဏန်းသမားအကြောင်း
အင်္ဂလိပ်လရဲ့ ဘယ်လမဆို ၄-ရက်၊ ၁၃-ရက်၊ ၂၂-ရက်၊ ၃၁-ရက်နေ့တွေမှာ မွေးရင် ၄-ဂဏန်းသမားလို့ ခေါ်ရမယ်။ သူတို့ရဲ့ မျက်နှာသွင်ပြင်ဟာ တစ်ခြားသူ နဲ့ မတူပဲ တမူ ထူးခြားနေတယ်။ ထက်ထက်မြက်မြက် ရှိတဲ့ မျက်နှာမိ်ျုး ရှိတယ်။ ၄-ဂဏန်းသမားတွေဟာ လွယ်လွယ်ကူကူ မိတ်ဖွဲ့လို့ မရဘူး။ တစ်နည်း တစ်ဖုံ ခွတီးခွကျ ဖြစ်လေ့ရှိတယ်။ အများတကာနဲ့လည်း အယူအဆချင်း မတူပဲ တစ်မျိုးတစ်ဖုံ ကွာဟနေတတ်တယ်။ စည်းကမ်းတွေ အမိန့်တွေကို မနာခံ တတ်ဘူး။ (၄)-ဂဏန်း သမားတွေဟာ မမျှော်လင့်ပဲ ရတနာပုံ ဆိုက်သလို ကြီးပွား တတ်တယ်။ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်း ရှိရင်လည်း အနည်းစုပဲ ဖြစ်လိမ့်မယ်။ အဲဒီ အနည်းစုကလည်း သူ့အပေါ် အင်မတန် သစ္စာရှိတဲ့ လူတွေ ဖြစ်တတ်တယ်။
ပြီးတော့ (၄)-ဂဏန်းသမားတွေဟာ ရောဂါဆန်းတွေ ဖြစ်တတ်တယ်။ မမြင်ရတဲ့ နေရာတွေမှာ အနာဖြစ် တတ်တယ်ကွ။ ရောဂါ ဖြစ်လာရင် လျှပ်စစ်ဓာတ်ကို အသုံးပြုပြီး ကုသတဲ့ ကုသနည်းဟာ အထူးကောင်းတယ်။ နောက်တစ်ခုက (၄)ဂဏန်းသမားတွေဟာ ဆေးစားခြင်း ဆေးသောက်ခြင်းထက် အချိန် လုံလုံလောက်လောက် အနားယူလိုက်ခြင်းဟာ ကောင်းတယ်။ ၄-ဂဏန်းသမား နေထိုင်မကောင်း ဖြစ်တဲ့အခါ သတ်သတ်လွတ် စားလိုက်တာနဲ့ ပျောက်ကင်း သွားတတ်ပါတယ်။
အခု ပြောပြခဲ့တာက မူလ(၄)ဂဏန်းသမား အကြောင်းပါ။
အဘမင်းသိင်္ခပြောပြတဲ့ ဂဏန်းဗေဒင်မှ မူလ(၅)ဂဏန်းသမားအကြောင်း
အင်္ဂလိပ်လ ဘယ်လမဆို (၅)ရက် ၊(၁၄)ရက် ၊ (၂၃)ရက် ၊ တစ်ရက်ရက်မှာ မွေး ရင် ဂဏန်းဗေဒင် ပညာအရ (၅)ဂဏန်းသမားလို့ ခေါ်ရမှာပဲ။ (၅)ဂဏန်း သမားရဲ့ မျက်နှာ သွင်ပြင်ကတော့ အစဉ်သဖြင့် ပြုံးရွှင် နေတတ်ပါတယ်။ စိတ်နေ စိတ်ထားကိုပြောရရင် အလွန် လှုပ်ရှားလွယ်တယ်။ ဘ၀ကို လျှောက်လှမ်းတဲ့ အခါ လောင်းကစားဆန်ဆန် လျှေက်လှမ်းတတ်ပါတယ်။ လောင်းကစားသမား လို့ ပြောတာ မဟုတ်ဘူးနော်။ စွန့်စားတာကို ပြောတာ။ အဆုံးအဖြတ် မြန်တယ်။ ဆင်းဆင်းရဲရဲ မနေရတတ်ဘူး။ လက်ဖျားမှာ ငွေသီးနေတဲ့ လူတွေဟာ များ သောအားဖြင့် (၅)ဂဏန်းသမားတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ငွေလည်း မမြဲဘူး။
(၅)ဂဏန်း သမားတွေ ဖြစ်တတ်တဲ့ ရော၈ါကတော့ အကြောတက်တဲ့ ရောဂါနဲ့ အာရုံကြောနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ရောဂါတွေ ပဲ ဖြစ်တတ်တယ်။ ဂဏန်းဗေဒင် စာအုပ်မှာတော့ ဓာတ်စာတွေ အများကြီး ပြထားပါတယ်။ (၅)ဂဏန်းသမား အတွက် တကယ်စွမ်းတဲ့ ဓာတ်စာကတော့ မုန်လာဥပဲ။ မုန်လာဥကို များများ စားပေးပါ။ (၅)ဂဏန်းသမားနဲ့ အလွန်တည့်ပါတယ်။
အခု ပြောပြခဲ့တာက မူလ(၅)ဂဏန်းသမား အကြောင်းပါ။
အဘမင်းသိင်္ခပြောပြတဲ့ ဂဏန်းဗေဒင်မှ မူလ(၆)ဂဏန်းသမားအကြောင်း
အင်္ဂလိပ်လ ဘယ်လမဆို ၆-ရက် ၁၅-ရက် ၂၄-ရက် တစ်ရက်ရက်မှာ မွေးရင် (၆)ဂဏန်းသမားလို့ ခေါ်နိုင်တယ်။ ၆- ဂဏန်း သမားရဲ့ မျက်နှာသွင်ပြင်ဟာ စွဲဆောင်နိုင်တဲ့ မျက်နှာမျိုး ဖြစ်တတ်တယ်။ ဘ၀မှာ အချစ်ရေးကြောင့် အိမ်ထောင်ရေးကြောင့် လွမ်းဆွေးရတာတွေ တွေ့ရတတ်တယ်။ အလှအပ ကို နှစ်သက်တတ်တယ်။ တေးဂီတ ပန်းချီ ပန်းပု စတာတွေကို နှစ်သက် တတ်တယ်။ လေးစားတတ်တယ်။ အထူးသဖြင့် အနုပညာကို ခံစားတတ်တဲ့ သဘောရှိတယ်။ သင့်တင့်တဲ့ အရောင်တွေကတော့ အပြာရောင် အမျိုးမျိုးဟာ အသင့်တော်ဆုံးပဲ။ သင့်မြတ်တဲ့ ကျောက်မျက်ရတနာကတော့ မြဟာ အသင့်မြတ်ဆုံးပါပဲ။
အခု ပြောပြခဲ့တာက မူလ(၆)ဂဏန်းသမား အကြောင်းပါ။
အဘမင်းသိင်္ခပြောပြတဲ့ ဂဏန်းဗေဒင်မှ မူလ(၇)ဂဏန်းသမားအကြောင်း
အင်္ဂလိပ်ရက် ( 7,16,25) ရက်မှာ မွေးထားရင် (၇)ဂဏန်း သမားလို့ ပြောရမှာ ပေါ့။ (၇)ဂဏန်းသမားတွေရဲ့ ပုံပန်းကတော့ ခပ်ကြောင်ကြောင် နေထိုင်လေ့ ရှိတယ်။ မသိရင် စိတ်ဖောက်ပြန်နေတယ်လို့တောင် ထင်ရတယ်။ ကိုယ်စွမ်း ကိုယ်စကို ယုံကြည်တယ်။ ထူးထူးဆန်းဆန်း အကြောင်းအရာတွေကို စိတ်ဝင် စားတတ်တယ်။ ခရီးထွက်ခြင်းမှာ မွေ့လျှော်တတ်တယ်။ ဘာသာရေးမှာ အများသူငါနှင့် မတူပဲ သူ့ ဘာသာသူ တွေးခေါ်ထားတဲ့ ဘာသာရေးမျိူးတွေ ဖြစ်နေတတ်တယ်။ အော်ကာတစ်ဇင်လို့ ခေါ်တဲ့ လောကီပညာကို လိုက်စား တတ်တယ်။
(၇)ဂဏန်းသမားတွေ အတွက် အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စတွေ ရှိရင်တော့ (၇)ရက်နဲ့ (၂၅)ရက်ဟာ ပထမတန်း ကောင်းတယ်။ (၂)ရက် (၁၁)-ရက် (၂၀)-ရက်တွေဟာ ဒုတိယတန်းစား ကောင်းတယ်။ အဲဒီရက်တွေမှာ လုပ်ပေတော့။
အခု ပြောပြခဲ့တာက မူလ(၇)ဂဏန်းသမား အကြောင်းပါ။
အဘမင်းသိင်္ခပြောပြတဲ့ ဂဏန်းဗေဒင်မှ မူလ(၈)ဂဏန်းသမားအကြောင်း
ဘယ်လမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အင်္ဂလိပ်လရဲ့ (8 ,17, 26) ရက်တွေမှာ မွေးတဲ့ သူတွေကို (၈)ဂဏန်းသမားလို့ ခေါ်တယ်ကွ။ ၂၆-ဆိုတာလည်း ၂-နဲ ၆-ပေါင်းလိုက်ရင် ၈- မဟုတ်လားကွာ။ (8) ဂဏန်းသမားတွေဟာ စကားပြော ပွင့်လင်းတယ်ကွာ။ အလုပ် လုပ်စရာရှိရင်လည်း အလုပ်ကို ဖိလုပ်တယ်။ နားစရာ ရှိရင်လည်း ကျကျ နန နားတယ်ကွာ။ ပြောစရာရှိရင်လည်း ဘယ်သူ့ကိုမှ အားမနာတတ်ဘူး။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောတော့တာပဲ။ သူ့အတိုင်းကတော့ ညစ်လေ့ မရှိဘူးကွ။ သူတစ်ပါးက ညစ်ပြီဆိုရင်လည်း ၈-ဂဏန်းသမားဟာ ပြန်ပြီး ညစ်တတ်တယ်။ ၈-ဂဏန်းသမား ညစ်ရင် ဘယ်လို လူမျိုးမှ လိုက်လို့ မမှီဘူးလေ။ အဲဒီမှာ တစ်ခု ထူးခြားတာကတော့ ၈-ဂဏန်းသမားဟာ ကံဇာတာ ညံ့ရင်လည်း အလွန် ညံ့တတ်တယ်ကွ။ ကောင်းရင်လည်း အလွန် ကောင်းတတ် တယ်။ လူကလည်း တစ်ဖက်စွန်းပဲကွ။ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဂရု မစိုက်တတ်ဘဲ အလုပ်တစ်ခုကို စမိပြီဆိုရင် ပြီးအောင် ဇွဲနဲ့ လုပ်တာ ၈-ဂဏန်း သမားတွေပဲ။ တစ်ခါတစ်ရံ အကြောင်းမဲ့ လောကကြီးကို မကျေမနပ် ဖြစ်နေ တာ ၈-ဂဏန်း သမားတွေပဲ။
မှတ်ချက်-ကမ္ဘာကျော် လက္ခဏာဆရာကြီး ကိုင်ရိုကမူ ၁၇-ကို ၈-ဂဏန်းဟု မယူဆပဲ ၈-ထက် ၆ရဲ့ အာနိသင်က ပိုတယ်ဟု ယူဆပါကြောင်း။
အခု ပြောပြခဲ့တာက မူလ(၈)ဂဏန်းသမား အကြောင်းပါ။
အဘမင်းသိင်္ခပြောပြတဲ့ ဂဏန်းဗေဒင်မှ မူလ(၉)ဂဏန်းသမားအကြောင်း
အင်္ဂလိပ်လရဲ့ (9 , 18 , 27) ရက်တွေမှာ မွေးတဲ့ လူတွေကို ၉-ဂဏန်းသမားလို့ ခေါ်တယ်။ ၉-ဂဏန်း သမားတွေဟာ သူများပေးတဲ့ ငွေတစ်ဆယ်ကို မမက်ဘူး ကွ။ ကိုယ်တိုင်ရှာတဲ့ ငွေတစ်ဆယ်ကို မြတ်နိုးတယ်။ ဘယ်ကိစ္စကို မဆို ကွယ်ရာ မှာ တစ်မျိုး ရှေ့တင်မှာ တစ်မျိုး မလုပ်တတ်ဘူးကွ။ အဲဒါကြောင့် ၉-ဂဏန်း သ မားတွေဟာ ရန်သူများတတ်တယ်။ တွဲလို့ ရရင်တွဲ။ တွဲလို့ မရရင် ကွဲ။ ပြတ်ပြတ် သားသားရှိတာ ၉-ဂဏန်းသမားတွေကွ။ ၉-ဂဏန်း သမားတွေဟာ မကြာခဏ လောကကြီးကို စိတ်ကုန်တတ်တယ်။ အဲဒီလို စိတ်ကုန်ပေမယ့် ၉-ဂဏန်း သမားတွေဟာ မယ်သီလရှင် ၊ ဘုန်းကြီး ၀တ်တာ နည်းတယ်ကွ။ ၉-ဂဏန်း သမားတွေဟာ အတိုက်အခိုက် ဘယ်လောက်များများ နောက်ဆုံးမှာ အောင်မြင် သွားတယ်။ ၉-ဂဏန်း သမားတွေဟာ သူတို့က မသိလို့ကွ။ ကြီးပွားချမ်းသာစေတဲ့ ဓာတ်တစ်မျိုး မွေးရာပါ ပါတယ်ကွ။
၉-ဂဏန်းသမားတွေ ဖြစ်တတ်တဲ့ ရောဂါကတော့ ကြောက်စရာကြီးကွ။ မဖြစ်ရင်လည်း နေရော ဖြစ်ရင်လည်း ကူးစက်တတ်တဲ့ ရောဂါ ဖြစ်တတ်တယ်ကွ။ ဘာမှ မဖြစ်ရင်တောင် အပူလောင်တာ မကြာခန ဖြစ်တတ်တယ်။
အခု ပြောပြခဲ့တာက မူလ(၉)ဂဏန်းသမား အကြောင်းပါ။
ဆရာဟိန်းတင့်ဇော် ……… ထံမှ ကူးယူဖေါ်ပြပါသည်။
This entry was posted in ဗေဒင်ကဏ္ဍ. Bookmark the permalink.
← ပျိုလား၊ အိုလား – ဆုံချင်သူများ တွက်ကြည့်မယ်
အချစ်နဲ့ ပတ်သက်လာရင် →